Cunug dhib badan, Kaniisadda Adduunka ee Switzerland Switzerland (WKG)
Tobaneeyo sano kahor kahor waxaan bartay cilmu-nafsiga carruurta oo qayb ka ah shahaadada kalkaalinta caafimaad. Hal daraasad, carruurta carqaladeysan ee leh dhibaatooyin kaladuwan ayaa loo tixgaliyay sida loola dhaqmo. Waqtigaas, waxaa loo aqoonsaday "caruur adag". Maalmahan eraygan lama aqbalayo adduunka macallimiinta iyo cilmi-nafsiga.
Tukashada waxaan inta badan maraa falalkeyga khaldan iyo fikradaheyga oo waxaan u arkaa inay lama huraan tahay inaan raalli geliyo Abuuraha Markii aan dhawaanahay naftayda ku jahwareeray tukashada, waxaan u yeeray Aabbaha Jannada: "Waxaan ahay ilmo aad u dhib badan!" Waxaan nafteyda u arkaa qof had iyo jeer ku dhaca kuna dhaca maskaxda. Ilaah miyuu sidan u arkaa? Waayo, Rabbiga Ilaahiinna ahu waa kula jiraa, oo Badbaadiye adag. Isagu wuu kugu farxi doonaa wuuna ku saaxiibi doonaa, wuu kugu cafi doonaa jacaylkiisa, wuuna kugu farxi doonaa isagoo faraxsan. (Sefanyaah 3,17).
Eebana waa dulqaadasho badan oo is bedel ah. Haddii uu igu waalan yahay, aniga ayaa loo sameeyaa. Waa waxa aan u qalmo, laakiin miyaanay ahayn waxa Ilaah ii dareemayo? Abwaanku wuxuu leeyahay: "Waad ku mahadsan tahay Ilaaha samooyinka, waayo, wanaaggiisu weligiisba wuu waaraa" (Sabuurradii 136,26). Waa inaan u mahadcelinaa in Ilaah, oo dhan jacaylkiisu uu inagu jecel yahay si joogto ah. Isagaa necebiya dembiyadeenna. Jacaylkiisa xad dhaafka ah iyo nimcadiisa ee Ilaah ina siiyay, carruurtiisa «adag», cafiska iyo madaxfurashada: «Waxaa ka mid ah, dhamaanteen waxaan mar uun nolosheenna ku noolaan jirnay damacyada jidhkeenna oo waxaan yeelnay doonistii jidhka iyo caqliga oo waxaan ahaayeen carruurtii xanaaqa by dabiiciga ah iyo sidoo kale kuwa kale. Laakiin Ilaaha naxariista hodanka ka ahu, iyo jacaylkiisa weyn ee uu ina jecel yahay, wuxuu inaga dhigay kuwa dhintay in lagu dembiyo dembiyada dhexdooda, iyagoo Masiix la nool. oo jannada lagu geliyo Ciise Masiix » (Efesos 2,4: 6).
Ilaah wuxuu leeyahay qorshe yaab leh: "Waayo, Rabbigu wuxuu leeyahay, Anigu waan ogahay wixii aan maskaxda kuugu hayo; (Yeremyaah 29,11).
Dhibaatooyinkaaga iyo xaaladaha aad isku aragtid naftaadu way adkaan karaan, laakiin adigu qof ahaan uma tihid.
waxaa qoray Irene Wilson